(Kugcine ukubuyekezwa On: 02/08/2021)
Lezi imicabango yami ukudla esihle kunazo zonke engake wajabulela, phakathi kwami uhlale e-Austria. Ngangikhona lapho ihlobo 2016 inyanga-4-internship yami ngesikhathi wosayizi omncane NGO wendawo. Okuhlangenwe nakho internship sasisikhulu kangangokuba, ngifika ukuhlangabezana abanamakhono abantu abasha, engazikhipha uhlale uthintana kuze kube manje, futhi ngiye ngakwazi ukusebenzisa amakhono ezifundiswa internship yami indima yami yamanje e Singapore.
Umsuka walezi zitsha ungaphikiswa kakhulu - abanye bathi lokhu kudabuka esifundeni saseSwabian, nabanye sisho futhi ukuthi irekhodi endala ka Kasespatzle sangomhla emuva cookbook ngesandla ekuqaleni kwekhulu le-17. Igama kungenzeka yini aqhamuke ukunyakaza nomkhombe doughs ku ucezu bite obujwayelekile, kodwa abukho ubufakazi zomlando ngakho. Ezikhathini zanamuhla, lokhu dish is ingxenye eyaziwa ukudla okumnandi ngemuva ukushaywa eside emoyeni omnandi Alpine. kungenjalo, ungakuthola ku zokudla kakhulu lendawo. Kunikezwe ezingxenyeni eziningi emazweni akhuluma isiJalimane, the Vorarlberg Kasespatzle (Vorarlberg uku West Austria) iyathandwa kakhulu e-Austria. Pasta Yenziwe ufulawa ocolekileyo, njengoba kushiwo umsuka igama, eseqedile ku Ukulunywa encane acwiliswe ushizi eyosiwe. Ukwaluka lasezulwini ngempela, encibilika emlonyeni. anyanisi ethosiwe kanye entwasahlobo anyanisi banezela izinongo kule ezulwini isidlo alube (empeleni ukwenza umsebenzi omkhulu!).
Ngibuyisele Austria - mina njalo ababaze noma nini ngithola lokhu Candy Empire Izitolo (abangenisa uhola Singapore analo confectioneries ngamazwe, lokhu endaweni kuphela Angikwazi ukuthenga imikhiqizo Indlela). Indlela kuyinto bendabuko Austrian ibhizinisi lomndeni ukusungulwa ukuthi yasungulwa ngasekupheleni kwekhulu le-19. Ehlome ngamathuluzi okuthola esiqinile izinga control, izithako ezikhethwe ngokucophelela, namaphakheji wesakhiwo sombala obomvana, lokhu womkhiqizo owayedume ngokuba isikhumbuzo isignesha e-Austria. Mannerschnitten (iphakethe hazelnut ushokoledi eziyizingcwecwana) kufanele uzame; akunjalo amnandi futhi kunganambitheki ngakho, lokhu kubonakala angezi umxhwele izinyo lami elimnandi. I hazelnut njalo uyisa Ngibuyisele izinsuku zami izihlakaniphi Vienna. Njengamanje ngihlala ngizama amafreyelethi wendlela kashokholethi ngesikhathi sokudla noma noma nini lapho ngiwulangazelela. Ngicabangé ukuthi Indlela itholakala izitolo eYurophu Ephakathi kuphela. Nokho, Ngingu ngokusobala okungalungile njengoba Mannar amaswidi ayatholakala e Singapore kakhulu.
Schlutzkrapfen (uhhafu wenyanga we-pasta ogcwele ushizi we-ricotta nesipinashi)
Ngihlangane nalesi sidlo ngenkathi ngihlola i-Innsbruck eNtshonalanga ye-Austria eyaziwa ngayo ingqophamlando, NGOPHAHLA Golden. Mina ezitshakadule ibe cafe futhi ngifuna into imifino. Ukufunda kuze imenyu, pasta ne yemifino ofakwe kwakuzwakala nice kimi, ngakho mina ngaphambilini ke. Bengicabanga pasta eside ne imifino oqoshiwe, kodwa kwathi kwathiwa ukuthi isicaba pasta ngento ngaphakathi futhi liyakhazimula fafaza ushizi aqotshwe entwasahlobo anyanisi. I bhotela wasebenza ton ukwenza lokhu dish ezishelelayo emlonyeni wami. okubaluleke kakhulu, Ngisakhumbula uweta eza etafuleni lami ngamcela kwakukuhle. Ngamtshela ke sasimnandi ngakho - mina sathintwa wakhe ukunakekela mayelana ukwaneliseka amakhasimende 'futhi inhliziyo yami yagcwala ngemfudumalo. Uvela South Tirol (manje ingxenye Italy), kungcono prevalently ukudla ezivamile angomakhelwane Tirol kanye. Inani elikhulu zomsebenzi kuhileleke ukwenza lokhu naphezu kweqiniso lokuthi kubonakala kulula ngakho ukwenza.
Enye yezinto "okumele kudliwe" eVienna, Austria. Kuyinto okukhethekile wendawo ngempela wadala ekupheleni kwesikhathi Habsburg. Bewazi yini ukuthi kwakukhona ukulwa kungazwakali kodwa kubalulekile emva lokhu ikhekhe? Laba bobabili saseVienna khekhe imidondoshiya, Demel futhi Sacher kwase kuyizinsuku 'emtoti' isimo impi isikhathi eside ukuthi ngisho kwaholela ngecala iwubuphukuphuku; ubani okufanele bazibiza i "Sachertorte yokuqala"? Kungakanani ibhilikotsi okufanele isetshenziswe ephelele ikhekhe? Uyini lokushisa afanele ushokoledi ketshezi? Ngokuzimisela, bona bathi konke lokhu inkantolo isimo, hhayi isigaba ukupheka noma yimiphi uhlobo. Ekupheleni, Sacher wayinqoba impi futhi manje prides ngokwabo ku lokuba "yasekuqaleni Sacher torte." Ngaphandle umlando, Mina mathupha wayekhetha Demel eyodwa njengoba imnandi kakhulu futhi Fluffy kunobukaJohane Sacher. Uyini umehluko phakathi Sacher "Sacher torte" kanye Demel uzakwabo? Lo mqeqeshi owake wapheka ithole zamanani ethe xaxa nokuningi ikhekhe izingqimba bese ukhulisa ibhilikotsi ngaphakathi ikhekhe. Lesi sakamuva ushibhile kancane bese creamier okuningi.
Isithunywa cosmopolitanism Vienna sika. eVienna, kukhona imithwalo nezimakethe ezithengisa izinto "exotic" 'izithako ivela cishe emhlabeni wonke. Ungathola ama-cuisine nezithako kusuka eRussia, igalikuni, Japan, India, futhi nokuningi. Ekuqaleni ezivela eMpumalanga Ephakathi, lokhu ingenye saseVienna ongakhetha ukudla ngomunwe ezitholakala ezimakethe zamazwe ngamazwe. Yenziwe chickpeas ecubuziwe, the falafel amabhola edliwayo ngesimo falafel ezisonga noma ihambisana ne isinkwa aba. Noma kunjalo, Falafel iza kweqembu Imi imifino kanye yogurts ngaphakathi wonke oat ukugoqa noma Pita isinkwa. Ukuba okuyisisekelo vegan ephelele, lena isidlo nabangane bami esetshenziswa angiphuze ngoba babazi mina kuphela kungagcini ukukhetha ukudla njengendlela imifino. Kukhona a ton of falafel anezinto wonke Vienna, kodwa intandokazi falafel ngimelele is fike Brunnenmarkt. Akwaziwa njengoba emakethe crazy ezishibhile lapho wonke umuntu angakwazi ukuthola afanayo ebanzi izithako ngamanani emangalisayo aphansi, kule makethe inikeza ingxenye falafel ukugoqa ukuthi futhi kubiza esingaphansi USD 1 noma kunjalo, okwenza ukuthi kube eshibhe kakhulu edolobheni. Akubuzwa, ukunambitheka kokugoqwa kuhle njenganoma iyiphi enye imakethe yaseViennese.
dessert engiyithandayo Austria! I-butterry khekhe kanye nezicucu ezimbalwa zama-apula nesixha sezithelo zomvini ezomileyo kusebenza umlingo futhi kungenza ngizizwe ngisezulwini. Le nganekwane ithi Austria amazwe sweet baklava dessert ezivela eMpumalanga Ephakathi. Baklava senziwa khekhe Fluffy kanye noshukela isiraphu, okusho ukuthi kucwila khekhe ku isiraphu. Ukuba ngasemoyeni elinuka ngaphezulu, Apfelstrudel inguqulo eyenziwe yaba eyasendaweni Baklava- lokhu isibonelo esihle sokudla Austria, njengoba eziningi kubo ungakwazi ukulandelela nokuncane kusukela wangaphambili Austrian umbuso esifundeni ayehlakazekele amazwe kusuka. Kukhona abaningi Apfelstrudel zokupheka inthanethi, futhi abanye ababhali beresiphi banomusa ngokwanele babelane ngomndeni wabo zokupheka nezwe. Nokho, umthetho wonke ukuthi inhlama kufanele ube mncane ukuze chef khekhe ungafunda phephandaba ngokumelwa ke.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu nombhalo bese nje ukusinika credit ne isixhumanisi kulokhu okuthunyelwe ibhulogi, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F6-must-try-austrian-dishes%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)